Muchokwadi, yega yega yekupisa magetsi chigadzirwa chine hupenyu hwayo hwebasa. Zvishoma zvemagetsi kupisa zvigadzirwa zvinogona kusvika anopfuura makore gumi. Nekudaro, kana iyo inopenya chubhu ikashandiswa uye ichichengetwa nemazvo, iyo inopenya chubhu inogara yakasimba kupfuura zvakajairika. Rega Xiao Zhou azviise kwauri. , Kugadzira radian ...
Iwe unoziva here ruzivo rwese urwu nezve kuramba waya?
Kune yekudzivirira waya, simba rekurwisa kwedu rinogona kusarudzika zvinoenderana nekupokana kwetambo yekudzivirira. Iyo yakakura simba rayo, zvinokwanisika kuti vanhu vazhinji havazive kusarudza waya yekumisikidza, uye hapana ruzivo rwakawanda nezve iyo yekumisikidza waya. , Xiaobian WI ...
Mutengo weNickel unorova mwedzi gumi nemana pakakwirira pane zvinotarisirwa kudiwa kwakasimba
Nickel, hongu, ndiyo simbi yakakosha yakacherwa muSudbury uye nevashandirwi vaviri veguta, Vale naGlencore. Zvakare kumashure kwemitengo yakakwira kunonoka kune kwakarongwa kuwedzera kwehuwandu hwekugadzira muIndonesia kusvika gore rinouya. "Zvichitevera zvasara pakutanga kwegore rino, panogona kuderera mu ...
Nickle Chrome Alloy Wire, Nichrome, Ion Nitriding, Ribbon Alloy Bayonets, Sayenzi Kunyorera, Kuayina Machines,